အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး (အင်္ဂလိပ်- The October Revolution) (ရုရှား - Октябрьская революция, Oktyabr'skaya revolyutsiya) ကို ရုရှားတော်လှန်ရေး (the Russian Revolution) ဟုလည်းကောင်း၊ နီမြန်းသောအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး (Red October ) ဟုလည်းကောင်း၊ မဟာအောက်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး (Great October Socialist Revolution) ဟုလည်းကောင်း၊ ဘော်ရှီဗစ်တော်လှန်ရေး (the Bolshevik Revolution) ဟုလည်းကောင်း လူသိများသည်။ ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်အရ ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၅)ရက်နေ့ (ဂရီဂေါ်ရီယန်းပြက္ခဒိန်အရ ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့)တွင် ပီထရိုဂရက်မြို့၌ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တော်လှန်ရေးနောက်တဆင့်ဖြစ်ပြီး ရုရှားပြည်တော်လှန်ရေး၏ အစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယာယီအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီး ဘော်ရှီဗစ်များကို အာဏာ ရရှိစေခဲ့သည်။ ယင်းတော်လှန်ရေးသည် ပီထရိုဂရက်မှတစ်ပါး အခြားမြို့များတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့သဖြင့် ၁၉၁၇မှ ၁၉၂၂ အထိ ရုရှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၉၂၂တွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ တော်လှန်ရေးကို ပီထရိုဂရက်မြို့မှ ဘော်ရှီဗစ်များက ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရအဆောက်အဦများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိမ်းပိုက်ကြပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့တွင် ဆောင်းရာသီနန်းတော် (ယာယီအစိုးရရုံး) ကို သိမ်းပိုက်လိုက်ကြသည်။
အစပိုင်းတွင် ယင်းဖြစ်စဉ်ကို အောက်တိုဘာအာဏာသိမ်းမှု (the October coup - Октябрьский переворот)ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၂၅ရက်နေ့ထကြွမှု (the Uprising of 25th)ဟုလည်း ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးဟုလည်းကောင်း၊ ဂရီဂေါ်ရီယန်ပြက္ခဒိန်အရ နိုဝင်ဘာလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် နိုဝင်ဘာ တော်လှန်ရေး ဟုလည်းကောင်း ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂၇ခုနှစ် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ ဒသမအကြိမ်မြောက်အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးနှစ်ပတ်လည်တွင် မဟာအောက်တိုဘာဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး (The Great October Socialist Revolution, Russian: Великая Октябрьская Социалистическая Революция, Velikaya Oktyabr'skaya sotsialisticheskaya revolyutsiya) ဟု တရားဝင်အမည်တပ်ပေးခဲ့သည်။
ရုရှားပြည်တွင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်။ ရုရှားပြည် ယာယီအစိုးရသည် တိုင်းပြည်ကို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ စားရေရိက္ခာရရှိမှုတွင် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၁၇ခုနှစ်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်ပမာဏသည် ၁၉၁၆ခုနှစ်ကထက် ၃၆% ကျဆင်းသွားသည်။ ဆောင်းဦးရာသီတွင် ယူရယ်လ်၊ ဒွန်ဘာနှင့် အခြားသော စက်မှုဇုန်များရှိ လုပ်ငန်းပေါင်း ၅၀%ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ရသည်။ လူနေမှုစရိတ်မှာ ကြီးမြင့်လာသည်။ လုပ်သားများ၏ လုပ်အားခမှာ ၁၉၁၃ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သော ပမာဏ၏ ၅၀%သာ ရရှိတော့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းကြွေးမြီမှာ ၁၉၁၇ခုနှစ်တွင် ရူဘယ်ငွေ ၅၀ ဘီလျံအထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ပေးဆပ်ရန်ကြွေးမြီမှာလည်း ရူဘယ်ငွေ ၁၁ဘီလျံအထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်မှာ ဘဏ္ဍာရေး ဒေဝါလီခံရကိန်းဆိုက်နေသည်။ ဗဟိုစက်မှုဇုန်ဒေသများတွင် ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလုပ်သမားသပိတ်၊ ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာနှင့် အောက်တိုဘာ လများတွင် မောစကိုနှင့် ပီထရိုဂရက်တို့၌ အလုပ်သမားသပိတ်များ၊ ဒွန်ဘာနှင့် ယူရယ်လ်တွင် သတ္တုတွင်းအလုပ်သမားသပိတ်၊ ဘာကူးတွင်ရေနံမြေအလုပ်သမားသပိတ်၊ မီးရထားလမ်းကြောင်းပေါင်း ၄၄ခုတွင် မီးရထားအလုပ်သမားသပိတ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းသပိတ်များအတွင်း အလုပ်သမားပေါင်း တစ်သန်းကျော်မျှ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ အလုပသမားများက စက်ရုံအလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းများကို သိမ်းပိုက်လိုက်ကြသည်။ ၁၉၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တောင်သူလယ်သမား လေးထောင်ကျော်က မြေရှင်များကို ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယာယီအစိုးရက လယ်သမားများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုပြုခဲ့ရာ လယ်သမားများက ပိုမိုဒေါသထွက်လာခဲ့ကြသည်။ ပီထရိုဂရက်၊ မော်စကိုနှင့် အခြားမြို့ကြီးများမှ စစ်သားများ၊ ဘောလ်တစ်ရေတပ်မှ ရေတပ်သားများက ယာယီအစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ကြောင်း၊ အမိန့်များကို နာခံမည်မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ဖော်ကြေညာသည်။ မှတ်တမ်းများအရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပေဗယ်လ် မီလ်ယူကော့ က ယာယီအစိုးရသည် ဝန်ရိုးတန်းနိုင်ငံများကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းရန် ဆန္ဒရှိကောင်း မေလ (၁)ရက်နေ့တွင် ပြောကြားလိုက်ရာ မကျေနပ်မှုများတိုးပွားလာခဲ့သည်။ မေလ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အတွင်း ဘောရှီဗစ်တို့ဦးဆောင်သော အလုပ်သမားများနှင့် စစ်သားများ အင်အား တစ်သိန်းကျော် ပါဝင်သည့် ပီထရိုဂရက်မြို့ဆန္ဒပြပွဲတွင် စစ်ကိုမလိုလား။ ဆိုဗီယက်တွေကို အာဏာလွှဲ။ ဟူသော စာတမ်းများ ကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ယင်းလူထုဆန္ဒပြပွဲများသည် ယာယီအစိုးရအတွက် အကျပ်အတည်းရိုက်စေခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့တွင် ပီထရိုဂရက်မြို့မှ အလုပ်သမားနှင့် စစ်သား ငါးသိန်းခန့်က စစ်ကိုမလိုလား။ ဆိုဗီယက်တွေကို အာဏာလွှဲ။ အရင်းရှင်ဝန်ကြီးဆယ်ယောက်နုတ်ထွက်ပေး။ ဟူသော စတမ်းများကိုင်ဆောင် ဆန္ဒပြကြသည်။ On July 1st about 500,000 workers and soldiers in Petrograd demonstrated, again demanding “all power to the soviets,” “down with the war,” and “down with the ten capitalist ministers.” The Provisional Government opened an offensive against the Germans on 1 July but it soon collapsed. The news of the offensive and its collapse intensified the struggle of the workers and the soldiers. A new crisis in the Provisional Government began on 15 July. On 16 July spontaneous demonstrations of workers and soldiers began in Petrograd, demanding that power be turned over to the soviets. The Central Committee of the Russian Social Democratic Labour Party provided leadership to the spontaneous movements. On 17 July, over 500,000 people participated inapeaceful demonstration in Petrograd. The Provisional Government, with the support of the SR-Menshevik leaders of the All-Russian Executive Committee of the Soviets, ordered an armed attack against the demonstrators. Fifty-six people were killed and 650 were wounded. A period of repression followed. On 5-6 July attacks were made on the editorial offices and printing presses of Pravda and on the Palace of Kshesinskaia, where the Central Committee and the Petrograd Committee of the Bolsheviks were located. On7Julyagovernment decree ordering the arrest and trial of Lenin was published. He was forced to go underground, just as he had been under the Tsarist regime. Bolsheviks began to be arrested, workers were disarmed, and revolutionary military units in Petrograd were disbanded or sent off to the front. On 12 July the Provisional Government publishedalaw introducing the death penalty at the front. The formation of the second coalition government, with Kerensky as chairman, was completed on 24 July. A conspiracy against the government began, headed by General Lavr Kornilov, who had been Commander-in-Chief since 18 July. In response toaBolshevik appeal, Moscow’s working class beganaprotest strike of 400,000 workers. The Moscow workers were supported by strikes and protest rallies by workers in Kiev, Kharkov, Nizhny Novgorod, Ekaterinburg, and other cities. On 25 August the right-wing General Kornilov beganamilitary revolt and started moving troops toward Petrograd. The Central Committee of the RSDLP appealed on 27 August to the workers, soldiers, and sailors of Petrograd to come to the defense of the revolution. The Bolshevik Party mobilized and organized the people to defeat the Kornilov revolt. The Red Guard in the capital, which by then numbered about 25,000 fighters, was supported by the garrison of the city, the Baltic sailors, the railroad workers, the workers of Moscow, the Donbas, the Urals, and the soldiers at the front and in the rear. Kornilov’s revolt and its defeat at the hands of the workers disorganized and weakened the Provisional Government, while demonstrating the strength of the Bolsheviks and increasing their authority. With Kornilov’s failed putsch, the Bolsheviks' popularity with the soviets significantly increased. During and after the defeat of Kornilovamass turn of the soviets toward the Bolsheviks began, both in the central and local areas. On 31 August the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers Deputies and on5September the Moscow Soviet Workers Deputies adopted the Bolshevik resolutions on the question of power. The Bolsheviks wonamajority in the Soviets of Briansk, Samara, Saratov, Tsaritsyn, Minsk, Kiev, Tashkent, and other cities. In one day alone, 1 September, the All-Russian Central Executive Committee of Soviets received demands from 126 local soviets urging it to take power into its own hands.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး&oldid=521024" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၉:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။